ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းလို… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ တရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဦးနဲ့ တွေဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တရားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုးတွေကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာလဲ၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ တရားလက်လွတ်ကျူးလွန်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဘာတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါသလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကို နားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Like – 11K Share – 1412
2021-06-08 at 6:52 PM
Justice must be done anytime and anywhere.
2021-06-08 at 6:54 PM
📍ပြည်သူ့​ကောင်းကျိုးအတွက် နိုင်ငံ့ကောင်းကျိုးအတွက်_ NUG အတွက် ကြံစည် လုပ်​ဆောင်မှု​​တွေအကုန်အောင် မြင်ပါ​စေ။
2021-06-08 at 6:59 PM
ဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်ရန် နည်းပညာနှင့် ပညာရှင်များ အသံလွှင့်စက်များ သို့မဟုတ် အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုခုမှ မီတာလိုင်း တစ်ခု ငှားရမ်း အသုံးပြရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိ
Oo Lay says:
2021-06-08 at 7:16 PM
ဆရာေရနယ္ေျမသိမ္းတာကအဆင္မေျပပါဘူး အေျခေနဆိုးပါလိမ္႔မယ္ ဘာေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ သိမ္းထားတဲ႔နယ္ေျမကို ထိုးစစ္မရ ရေအာင္ဆင္ပါလိမ္႔မယ္ ဘယ္လိုမွေတာင့္ခံလို႔မရပါဘူး လက္နက္ျကီးနဲ႕ပစ္မယ္ ေလတပ္ကေန ဗုံးျကဲမယ္ ေလယာဥ္ေတြနဲ႕ပစ္ကူရင္ မရနိုင္ပါဘူး ဒါေတြကို ကာကြယ္ဖို႔တြက္ရွိထားရင္ေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္ဆရာ ျဖစ္နိုင္ရင္ နယ္ေျမသိမ္းတာမလုပ္ပဲ တနိုင္ငံလုံးတခ်ိန္ထဲ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္တပ္မေတာ္ေတြနဲ႔ PDFေတြနဲ႕ ေနရာအနွံ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျပီးရင္ ဘယ္လိုေလယာဥ္လာလာ ပစ္ခ်နိုင္မယ္ဆိုရင္ 3ရက္မျကာပါဘူးဆရာ
Moe Pa Pa says:
2021-06-08 at 7:17 PM
Win Aungkyaw says:
Now we have ministry of human rights and ministry of justice.
Phyo Lay Phyolay says:
2021-06-08 at 8:19 PM
သိပ်ခါ သမာဓိရှိပြီမှန်ကန်တဲ့ တရား စီရင်ရေးစနစ်တွေ ထွန်ကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မှတာ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း ငွေများတရာနိုင်စနစ် တွေ ပျက်သုံးလိပ်မယ်
ဒါမှတာ နိုင်ငံဟာ ငြိမ်းချမ်းပြီး လုံခြုံမူရှိလိပ်မယ်
မှန်ကန်မျှတတဲ့ တရားရေးစနစ်တွေမရှိဘူးဆိုရင် ခံရသူဘက်က ခံလည်းခံရတယ် အမူလဲမနိုင် ဘူဆို အခွင့်ကြုံလျှင် ခံပြင်စိတ်နဲ့လူသတ်မူအထိဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်
ဒါကြောင့် မှန်ကန်မျှတတဲ့ တရားရေးစနစ်လိုအပ်တယ် ဒါမှတ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ် လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ဆင်ချင်လာနိုင်မယ် တရားတယ်မတရားဘူးခွဲခြားလာနိုင်မယ် ဒါလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ် အနိုင်ကျင့်ရင်ဘာဖြစ်မယ် မလုပ်သင့်တာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ် သိလာမယ် ပိုက်ဆံရှိတိုင် ပါဝါ အာဏာ ရာထူးရှိတိုင်း အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျလို့မရတော့ဘူး
Chit Ko Ko says:
2021-06-08 at 9:23 PM
စိုင်းကိုကို လေး says:
2021-06-08 at 9:38 PM
Hnin Thitsar Kyaw says:
နိုင်ငံတော် ကြီး NUG လက်ထက်
ရောက် မှတရားဉပဒေအောက် မှာ
လုံလုံ ခြုံ ခြုံနေရတော့မယ်
အရေးတော်ပုံ အ မြန်ဆုံး အောင်ပါစေ
Ko Hlaing Oo says:
Sabae Mimi says:
2021-06-08 at 10:22 PM
U Hla Oo says:
2021-06-08 at 10:30 PM
တရာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။
Nyi Zay Nyi Zay says:
2021-06-08 at 10:50 PM
2021-06-08 at 10:57 PM
ဒေါင့်စေ့နေတာဘဲ ပွဲကတော့ လှပလို့လာပါပြီ ကျေးဇူးပါ NUG
2021-06-08 at 11:00 PM
Henna Nori says:
2021-06-08 at 11:05 PM
အရဟံ အရဟံ says:
2021-06-09 at 12:50 AM
2021-06-09 at 5:28 AM
Nan Yin Yin Lay says:
2021-06-09 at 5:53 AM
2021-06-09 at 7:44 AM
မတရားသူကြီး​တွေ ကို ဖယ်ရပါမယ်
2021-06-09 at 8:21 AM
2021-06-09 at 8:43 AM
La Min T says:
2021-06-09 at 9:44 AM
2021-06-09 at 2:31 PM
လေးစားပါတယ် ကျိုဆိုပါတယ် ဝန်ကြီး ရာထူးနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်
2021-06-09 at 3:49 PM
2021-06-09 at 5:48 PM
Min Min Min Min says:
Ko Lumone says:
2021-06-09 at 10:37 PM
Tha Gyan says:
2021-06-10 at 8:21 AM
ျပည္သူ႔အစိုးရ NUG အျမန္ဆံုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါေစ
Rose Ni says:
2021-06-11 at 12:34 PM